Fomba 6 hampijanonana ny ozona be loatra (satria tsy mpitondra sambo ianao) - Blog
Fomba 6 hampijanonana ny ozona be loatra (satria tsy mpitondra sambo ianao)
Vitsy ny zavatra manome fahafaham-po sy katolika kokoa noho ny mandatsaka expletive amin'ny fotoana mety.
Misy fotoana tsy itenenan-teny tsy fantatra afa-tsy izay tena afaka maneho ny fihetsem-po tsapanao ankehitriny.
Na nibontsina ny rantsan-tongotrao ianao na nahalatsaka tsy nahy ny entanao dia saika fitsaboana ny famelana ny teny cuss manidina.
Toy izany koa, ny teny fianianana misafidy dia mety hahatsapa ho tsara amin'ny toe-javatra mety koa, rehefa te hifaly amin'ny zavatra tsara ianao.
Ny fanozonana an-tsokosoko ho fomba iray hivoahana na amin'ny resadresaka dia mety hiteraka fahazaran-dratsy. Ny olana dia mijaly ny sivana anao amin'ny teny eken'ny fiaraha-monina rehefa mianiana tsy tapaka ianao.
Tsy te handatsaka baomba F eo anoloan'ny orinasa tsy mety ianao satria mety hiteraka fiheverana diso. Mety tsy maninona izany olona izany amin'ny fianianana amin'ny heviny mahazatra fa mety hihevitra azy ho tsy mety amin'ny toe-javatra iainanao izao.
Ny toeram-piasana dia mety voadona na tsy tratry ny ozona mahazatra. Ny toeram-piasana iray dia mety ho tontolo iainana misy ny olona izay manapaka sy misento isan'andro. Taona maro ao amin'io tontolo iainana io dia hanome anao fianianana tsy ara-potoana, izay tsy tadiavinao raha toa ka mahita asa hafa ianao izay misy azy ireo henjana kokoa.
Tom vahiny Jamie lee Curtis
Ny olana hafa amin'ny fianianana tsy ara-potoana dia ny fitomboan'ny hakamoana maneho hevitra. Ny teny Cuss izay ampiasaina matetika loatra dia mety ho lasa tsy mazava ny zavatra resahinao. Izany dia manakana ny fahaizanao mifampiresaka amin'ny olon-kafa amin'ny fomba misy heviny sy mahomby.
Toa sahy ve izany?
Sa toa fanatsoahan-kevitra tsy mitombina amin'ny fampiasana matetika ny teny cuss?
nahoana no diso fanantenana aho
Azo ahitsy io fahazaran-dratsy io. Noho izany, andao hijery fomba vitsivitsy hampihenana ny fianiananao tsotra izao.
1. Inona no antony tsy hanaovanao teny ratsy?
Izay manandrana manova fiovana lehibe amin'ny fahazarany dia afaka mahazo tombony amin'ny fananana antony matanjaka sy voatonona mazava tsara hanaovana io fanovana io.
Misy anao antony iray Star Avaratra manampy anao hijanona eo amin'ny lala-mahitsy izany rehefa sosotra na tezitra.
Ary mety hanao izany ianao, rehefa avy nanao soa tamin'ny tsy nanozona an-tsokosoko ary avelao hanidina tsy nahy ianao rehefa nokapohinao teo am-baravaran'ny kabinetra ny rantsan-tànanao satria tsy nandinika ianao.
Ka inona no antony? “Te-hitsahatra tsy hiteny ratsy intsony aho satria…”
'… Tsy te-ho voasoratra any am-piasana aho.'
“… Te hifandray tsara amin'ny olon-kafa aho.”
“… Ny renibeko malalako dia manome ahy izany endrika malahelo sy mahamenatra izany rehefa manao izany aho.”
“… Nandre ahy ilay zaza ka nilaza tamin'ny olona rehetra tao amin'ilay fivarotana fa ny teny vaovao nianaran'izy ireo.”
2. Fantaro rehefa mianiana ianao.
Rahoviana ianao no manao fianianana tsotra izao? Moa ve izy io amin'ny fotoana rehetra, zavatra tsy mahazatra? Moa ve rehefa tezitra na tezitra ianao? Ao amin'ny gym ve sa rehefa manao zavatra mafy ianao? Ao amin'ny toeram-piasana ve izay tontolo iainana voajanahary fotsiny?
Ny fahafantarana ny fotoana fianiananao dia afaka manampy anao hifehezana ilay fahazarana amin'ny alàlan'ny drafitra mialoha.
Ny olona mianiana amin'ny asany matetika dia afaka mampatsiahy ny tenany mba hitadidy bebe kokoa ny teniny rehefa tonga eo am-pandraisana izy.
Ny fianianana tampoka noho ny fahatezerana dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny segondra vitsy hialana sasatra ary hamafana ny sainao alohan'ny hamalianao ny toe-javatra iray.
Manampy folo segondra eo anelanelan'ny volan'ny fihetseham-po voalohany sy ny valiny fotsiny dia hanao fahagagana amin'ny fanaraha-maso ny zavatra lazainao sy ataonao rehefa tezitra ianao. Tsy mety amin'ny rehetra io, fa mety amin'ny olona maro raha ataonao fahazarana izany.
3. Ny siny Ol ’fianianana
Azo inoana fa efa naheno momba ny tavoahangy ol ianao. Taranaky ny olona no nanakana ny fianianany tamin'ny fampiasana siny fitenenan-dratsy.
Tsotra sy mandaitra izy io. Mametraha dolara ao anaty siny isaky ny mianiana. Rehefa tapitra ny fotoana voafaritra mialoha izay nahombiazanao tamin'ny fitenenan-dratsy, alao ny vola ao anaty siny, ary manaova zavatra hanome valisoa ny tenanao amin'izany.
Fa maninona no mandeha ity? Ny fahatsoran'ny fomba fiasa ao ambadiky ny jar jar fianianana dia manarona ny fiasa…
teny mba hahatonga olona iray mihevitra manokana
Fahazaran-dratsy ny fianianana tsotra izao. Ary ny fahazarana dia zavatra ataontsika tsy misy fieritreretana na fiheverana satria ireny fotsiny no ataontsika. Amin'ny ankapobeny tsy mieritreritra momba ny fahazarana ataontsika isika rehefa manao azy. Ataontsika fotsiny izy ireo.
Siny fitenenan-dratsy manapaka an'io dingana io amin'ny fametrahana sazy aminao noho ny tsy fiheveranao ny fahazarana sy ny fihetsikao.
Sarotra kokoa ny mianiana tsy an-kijanona rehefa mieritreritra ny zava-misy ianao fa mila manangona dolara hafa ho an'ny siny raha manao izany.
Ny siny fitenenan-dratsy dia mamorona toerana ho anao handraisana fanapahan-kevitra tsara kokoa sy hisafidianana teny samy hafa hanehoanao ny tenanao.
Ary avy eo, rehefa nahomby tamin'ny tsy nianiananao vetivety ianao dia azonao atao ny mampandeha ny foiben'ny valisoa ao amin'ny ati-doha miaraka amin'izany vola mamy sy mamy izay azonao tamin'ny tsy fanompana izany.
4. Makà mpiara-miasa tompon'andraikitra.
Ny fanovana ny tenanao sy ny fiainanao dia mora kokoa rehefa miasa miaraka amin'olon-kafa io.
Misy olona ve eo amin'ny fiainanao vonona ny ho mpiara-miombon'antoka amin'ny fandraisana andraikitra na hanakana ny fianianany aminao?
Ny fananana olona iray hafa hilaza rehefa misosa ianao dia afaka manampy anao hisarika ny sainao ho amin'ny fihetsiky ny fahazaran-dratsy ary manery anao mieritrereta alohan'ny hitenenana any aoriana.
Tena manampy tokoa ny fiaraha-miasa amin'ny olon-kafa izay te-hijanona tsy hanozona be loatra. Izy ireo dia hizara ireo fahasosorana sy fahasosorana mitovy amin'ny anao rehefa mianiana tsy nahy izy ireo.
Io karazana fahatakarana io dia afaka manampy anao roa hamela bebe kokoa ny lesoka ary miverina aminy avy hatrany rehefa manozona fotsiny.
5. Manolo na mamorona teny vitsivitsy.
Ny fanoloana ozona amin'ny teny izay tsy ho hitan'ny hafa manafintohina dia fahazarana tsara kokoa ananana.
Heck, fudge, mitifitra, ary darn izany dia mety tsy mitovy totohondry sy pizzazz ny tena ozona teny, fa izy ireo dia azo antoka fa tsy hanafintohina olona na hiteraka olana fanampiny.
Ny fampiasana ireo teny malefaka kokoa ireo dia mety hahatsapa ho hadalana tamin'ny voalohany, saingy handalo ilay tsy fahampiana ianao amin'ny ezaka tsy tapaka. Rehefa dinihina tokoa, tsy dia mahasadaikatra lavitra noho ny famelana ny teny cuss misolelaka eo alohan'ny lehiben'ny sefo raha mbola any am-piasana ianao.
Ary alaivo an-tsaina hoe ianao no karazana famoronana na eklektika. Amin'izay dia mety te hamorona teninao ianao hampiasaina ho soloina na hanaiky zavatra somary mampihomehy kokoa - toa ny shish kebab fa tsy ny sh * t na dagnabbit fa tsy damn.
6. Tehirizo amin'ny fotoana mety ny fianianana.
Tsy mila mianiana amin'ny fanozonana tanteraka ianao. Indraindray dia mety ary antenaina ny fianianana. Izy io dia afaka manampy anao hikotrana rehefa any amin'ny gym ianao na mila manao fanatanjahan-tena.
Angamba fiteny manga kely dia hanampy anao hifandray amin'ny olona manana karazan-toetra ratsy kokoa. Ary indraindray tsy misy teny tsara noho ny teny F fotsiny hanehoana ny hatezeranao sy ny fahasosoranao.
Tsy maninona. Tsy mila tonga lafatra ianao na tsy mianiana intsony. Miasà fotsiny amin'ny fampihenana ny ozona mahazatra, ary ho azonao atao ny misoroka ny lesoka ara-tsosialy marobe ary maneho mazava ny tenanao.
Sarotra ny manova ny fahazarana, koa aza mafy loatra amin'ny tenanao raha tsy mahazo tsara avy hatrany. Mifikitra aminy, dia afaka manova izany fahazarana izany ianao.
tononkalo momba ny tsy fananan'ny olon-tiana
Fomba 10 hampiatoana ny fahazaran-dratsy indray mandeha
Ahoana no fomba hieritreretana alohan'ny hitenenana: Dingana 6 TSY maintsy raisinao
Zavatra 10 mendri-piderana ataon'ny olona ary tsy atao (izany hoe fomba fahalalam-pomba)
Hevitra fanamby mandritra ny 30 andro: lisitry ny zavatra tokony andramana
aho, toy ny zazalahy Inona no ataoko
Ahoana no ho faly raha tsy misy namana
Romana manjaka mandresy ny amboara Tompondakanay
fomba fanamboarana olona